Aသွေး | J-Myanmar
သူ​ကြည့်​လိုက်​ရင် မာနကြီး​မယ်​ပုံ​ပါ မ​ခင်​သေး​လို့​ပါ ခင်​ရင်​တော့ သူ​တို့​ဟာ အ​ပြုံး​လေး​တစ်​ပွင့်​နဲ့ အ​မြဲ​နှုတ်ဆက်​တတ်​တယ် ခင်​ကြည့်​လိုက်​ရင် ခင်​ဖို့​ကောင်း​ပါ​တယ် တ​က​ယ့်​သူငယ်ချင်း​ကောင်း​ပါ သူ​နဲ့​တိုင်ပင်​လို့​ရ​တယ် ကူညီ​နိုင်​တာ သူ ကူညီ​ပေး​တ​တက်​တယ် မ​ကူညီ​နိုင်​ရင်တောင် အကောင်း​ဆုံး​လမ်းပြ​ပေး​တယ်
သူငယ်ချင်း​များ​ကို စိတ်​ရင်း​နဲ့ ခင်မင်​ရင်းနှီး​ပေါင်းသင်​တက်​တယ်
ဒါ​ပေ​မယ့် သူ​တို့​ကို​ကျ​တော့ သူငယ်​ချင်​အ​တော်​များ​များ အပေါ်​ရံ​ပေါင်းသင်း​တတ်​လို့ Aသွေး​များ သတိထား​ပါ
Aသွေး အချစ်​ရေး​မှာ​တော့ အားလုံး​သိ​တဲ့​အတိုင်း အ​သဲကွဲ​သမား​လေး​တွေ​ပါ အနည်း​ဆုံး တစ်​ခါ​တော့ အ​သဲကွဲ​ပီ​မှ သာယာ​တဲ့ အချစ်​ကို​ရ​ကျ​ပါ​တယ်
အချစ်​နဲ့ ပတ်သက်​လာ​ရင် အလွန်​စည်းကမ်းရှိ​ပါ​တယ်
အခု​မြင်​အခု​ကြိုက် မ​ရှိ​ပါ​ဘူး သူ​တို့​နှလုံးသား​ကို တော်တော်​နဲ့​မ​သိမ်းပိုက်​နိုင်​ပါ​ဘူး သူ​တို့​ချစ်​မိ​ပီ​ဆို​ရင်​လည်း တစ်​ယောက်​ဆို တစ်​ယောက် ၊ပိတောက်​ဆို ပိတောက်​ပါ​ပဲ။
အချစ်​ကြီး​တယ် ၊အချစ်​မြဲ​တယ် ၊ သဝန်တို​တတ်​လွန်း​သူ ဖြစ်​တယ်။တခြား​သူ​တွေ​ထက် Aသွေး​ဟာ သဝန်တို​လွန်း​ပီ သစ္စာရှိ​ကျ​တယ်။ကိုယ့်​ချစ်​သူ​ကို အထိ​မ​ခံ​စေ​ချင်​ကြ​ဘူး စ နောက်​လို့​ရ​ဘူး၊သူ​နဲ့ ပက်​သတ်​လာ​ရင် အစွဲ​အ​လန်း တ​အား​ကြီ​တယ် ယုံကြည်​လွန်ကဲ​တတ်​ကြ​တယ် တဖက်​သက်​ဆန်​တတ်​ကြ​တယ် ဘယ်​အရာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ကိုယ်​ပြော​တဲ့​စကား​ကို​ပဲ နားထောင်​တာ နှစ်သက်​သဘောကျ​တယ်။
Aသွေး များ​ဟာ ​စိ​တိ​သဘောထား​ဖြူစင်​တယ် သဘော​အလွန်​ကောင်း​တယ် ကူညီ​တတ်​တယ်
သူ​များ​နဲ့​မ​တူ​တာ​က Aသွေး​များ​မှာ သနား​စိတ် ကရုဏာ​စိတ် ခွင့်လွှတ်​နား​လည်း​ပေး​တတ်​မှု​တွေ သူ​တို့​မှာ​အ​ပြည့်​ရှိ​တယ်။
စေတနာရှိ​လို့​ကတော့ အဖိုးတန် ပစ္စည်း​ဖြစ်​နေ​ပါ​စေ ပေး​ပစ်​တယ်။
Aသွေး​လေး​၏ အချစ်​ရေး​ဟာ သူ​က​ချစ်​သူ​ကို အရမ်း​ချစ်​သ​လောက် ဂရုစိုက်​တာ အလေး​ထား​တာ နားလည်​မှု​တွေ ခွင့်လွှတ်​မှု​တွေ​ရှိ​သ​လောက် ပေး​နိုင်​သ​လောက် ပြန်​မ​ရ​ကျ​ဘူး ။ သူ​တို့​ပေး​သ​လောက်​ပြန်​မ​ရ​ရင်​နေ​ပါ အနည်းငယ်​လောက်​တော့​ပြန်​ပေးလိုက်​ပါ ဘာ​လို့​လည်း​ဆို​တော့ သူ​တို့​ဟာ အရမ်း​ဝမ်းနည်း​တတ်​လို့​ပါ ၊
ချစ်​သူ​၏ ဂရုစိုက်​တာ အလေး​ပေး​တာ အရမ်း​လိုချင်​သူ​တွေ​ပါ။စိတ်​ခံစား​မှု​ပြင်းထန်​တယ် ဘာ​မှ​မဟုတ်​တာ​လေး​က အစ စိတ်​ထဲ​မှာ ဝ​မ်​နည်း​ခံစား​တ​တိ​တယ်။သူ​တို့ စိတ်ဆိုး​ရင် ခဏ​ပါ​ပဲ နှစ်​ခါ​မ​ချော့​ရ​ပါ​ဘူး ။သူ​တို့ စိတ်​အရမ်း​ဆိုး​ခဲ​ပါ​တယ် သူ​တို့​အမုန်း​ဆုံး ကတိ​သစ္စာ​မ​ရှိ​မဲ့​လို့​ကတော့ ဘယ်လောက်​အသက်​မျှ ချစ်​ရ​ပါ​စေ ပြတ်သား​တယ် ကျောခိုင်း​ပီ လှည့်​မ​ကြည့်​တက်​တဲ့​သူ​တွေ​ပါ သွေး​အေးအေး​နဲ့​ရက်စက်​တက်​ပါ​တယ် မ​ချစ်​လို့​တော့​သွား​မ​ပြော​ပါ​နဲ့ သူ​တို့​လောက်​ချစ်​တတ်​တာ အချစ်​ကြီး​တာ သူ​တို့​ပါ ။
Next post A . B . AB . O သွေး အကြောင်း
Previous post ဥ​ရော​ပ​မှာ အသက်​အကြီး​ဆုံး အမျိုးသမီး​ရဲ့ အသက်​ရှည်​ခြင်း လျှို့​ဝှက်​ချက်
A . B . AB . O သွေး အကြောင်း